DEG DEG+DAAWO: MD Axmed Karaash oo mar kale digniin u diray Somaliland & amar culusna siiyay Ciidanka P/land ee Sool & Sanaag
June 12, 2019 muqdisho Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland 5
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo la hadlayay Ciidanka Daraawiishta Puntland ayaa kula dardaarmay markasta iney u heelanaadaan Difaaca sharafta Qayimka Puntland.
Sidoo kale,madaxweyne Karaash ayaa ku dhiira geliyay ciidanka iney dhankooda qaadanayaan wixii awoodooda ah ee lagu taageeri karo Ciidanka,islamarkaana ay joogteyn doonaan mushaarkooda.
Wuxuu si gaar ah ciidanka ku sugan Gobolada Sool iyo Sanaag ugu ammaanay siday cadow uga difaacayaan deegaanadaasi oo uu kala jeediyay Maamulka Somaliland,wuxuuna digniin adag u diray maamulka Jeegaanta ee Muuse Biixi.
“Action Speaks Louder Than Words” baanay madaxda Puntland wali macnaheeda dhaadin bay ii la muuqataa. Sideeda ba dawladi marka ay af ku dirirka badsato oo ay addimaha iska laabato iyada ayaa nacabkeeda isu qaawisay oo itaal daradeeda toos ugu muujisay. Digniin kasta ba nacnac iyo waxaa loo fasiranayaa cabaad fulanimo. Waxaa kale oo ay u badantahay in ay madaxda Puntland ka tahay “qawda maqashii wax na ha u qabanin” oo ah straatijiyad khiyaano iyo beenawaasnimo ku salaysan.
Teer iyo 2007dii bay Puntland intaas digniino ugu hanjabaysay oo Hargeysa waxay u tahay muuzik ay dhegaheedu ku raaxeystaan runtii. Dad falsafad iyo qaddiyad u go’an oo u qeexan ku taagan baa ku darsada geesinimadii iyo dhiiranaantii ay siyaabo kasta ugu duulin lahayd oo uguna difaacan lahayd. Maamul fallaageedka Hargeysa ayaa tusaale fiican Puntland uugu filan xaqiiqadan iyada ahi. Haddii ceeb iyo caayiro loo dhinto madaxda Puntland baa u lee’an lahayd.
Dhilo maakhir… dhuusadeedu iidoor waxba ma yeesho.
Caare waa geesi geesi dhalay oo waa ninka
MUUSE FARUUR and MUUSE DAMEER meel cad uga soo hadhay oo waliba maanta ilaa uu afka ku dhufto MEESE BIIXIYO aanba seexan doonin.
CAARE HA NOOLAAADO, MUUSE BIIXINA HA JABO wuu jabiye dhiigyacabku
Caare… waa naaag majeerteen ah naaso waa weyn joogta qardho ma iman karo . Sool & sanaag
Sool & sanaaag.. calanka Somaliland ayaa ka taagan.